Football Khabar » फुटबलमा परिवर्तन हुँदैछन् यी ६ नियम
फुटबलमा परिवर्तन हुँदैछन् यी ६ नियम
एजेन्सी, जेठ १७
विश्वको सबैभन्दा प्रख्यात खेल फुटबलमा नियम परिवर्तन गरिने भएको छ । हाल चलनचल्तीमा रहेका केही नियमलाई परिवर्तन गरेर परिस्कृत गर्न लागिएको हो ।
विश्व फुटबलको नियमन गर्ने संस्था ‘इन्टरनेसनल फुटबल एसोसियसन बोर्ड’ ले यस्तो तयारी गरेको छ । उसले ‘लज अफ् द गेम’ अन्तर्गत विभिनन ६ वटा नियम परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको हो ।
जसअनुसार परिवर्तित नयाँ नियम सन् २०१९ को जुन १ तारिखबाटै लागू हुनेछ । खेललाई थप सहज र तटस्थ बनाउन नियम परिवर्तन गर्न लागिएको हो । यहाँ परिवर्तन गर्न लाएिगका नियमबारे चर्चा गरिएको छ :
(१) सब्सिच्युट हुँदा सबैभन्दा नजिकको लाइनबाट बाहिरिनुपर्ने
अहिले खेलको अवस्थाअनुसार कुनै पनि खेलाडी सब्सिच्युट हुँदा समय खपत गर्ने नियतले आरामले बाहिरिने गर्छन् । तर, अब त्यसो गर्न पाइनेछैन । नयाँ नियमअनुसार सब्सिच्युट हुने खेलाडीले आफू मैदानको जुन भागमा भए पनि आफू रहेको सबैभन्दा नजिकको लाइनबाट बाहिर निस्कनुपर्छ ।
(२) फ्रि किक हान्दा मानव पर्खालमा बस्न नपाइने
अहिले फ्रि किक हान्ने बेला फ्रि किक लिने टोलीका खेलाडी पनि विपक्षी खेलाडी पनि मानव पर्खालसँगै रहन्छन् । तर, नयाँ नियमअनुसार अब फ्रि किक लिँदा विपक्षी खेलाडीका ३ वा सोभन्दा बढी खेलाडीको पर्खाल राखिएको अवस्थामा फ्रि किक लिने खेलाडी १ मिटर टाढै बस्नुपर्छ ।
यसो गर्दा मानव पर्खाल रहने बेला दुई पक्षका खेलाडीबीच हुने ठेलाठेल र तनावको अवस्था अन्त्य हुनेछ ।
(३) ‘ड्रप बल’मा पनि नयाँ नियम
हालको अवस्थामा ड्रप बलमा दुवै टिमका खेलाडी बल खोस्ट अग्रसर हुन्छन् । तर, नयाँ नियमले यसलाई पनि परिवर्तन गरेको छ । जसअनुसार अबदेखि बल ड्रप भएका बेला जुन खेलाडीसँग बल हुन्छ वा जुन टिमका खेलाडीले अन्तिमपटक बल छोएको हुन्छ, त्यसै टोलीका खेलाडीले बल चलाउन पाउनेछन् ।
यदि बक्सभित्र बल ड्रप भएको खण्डमा भने टिमका गोलकिपरले बल रिलिज गर्न पाउँछन् । यो अवस्थामा दुवै टिममा खेलाडी कम्तीमा ४ मिटर दूरीमा रहनुपर्छ ।
(४) अब प्रशिक्षकलाई पनि रातो कार्ड !
नयाँ नियमअनुसार अब खेल दौरान टच लाइनमा बसेर खेल भावनाबिपरीत व्यवहार गर्ने प्रशिक्षकलाई पनि अवस्था हेरी पहेंलो वा रातो कार्ड दिइनेछ ।
(५) पेनाल्टीमा पनि नयाँ नियम
अबदेखि पेनाल्टी प्रहारमा पनि नयाँ नियम लागू हुनेछ । पेनाल्टीक्रममा हुने विवादलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यसमा नयाँ नियम लागू गर्न लागिएको हो ।
अब नयाँ नियमअनुसार पेनाल्टी हान्ने बेला गोलकिपरले पोस्ट र क्रस बार छुन पाउनेछैन । त्यसैगरी, गोलकिपरको एउटा खुट्टा गोल लाइनमाथि वा भित्र रहेको हुनुपर्छ । यो नियमले पेनाल्टीमा हुने विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
(६) ‘आकस्मिक ह्यान्ड बल’को गोल रद्द गरेर फ्रि किक दिइने
अब बक्सभित्र कुनै पनि खेलाडीको हातमा लागेर गोल हुन्छ भने त्यसलाई गोल मानिने छैन । तर, त्यो बेला बलले कसरी हातमा लाग्यो भन्ने कुरा हेरिनेछ । नयाँ नियम भन्छ– यदि कुनै खेलाडीको हातमा लगेर गोल हुन्छ । र, खेलाडीलाई बलको अवस्था थाहा छैन भने सो गोल मान्य हुँदैन ।
त्यस्तो बेला गोल रद्द गरेर विपक्षी टिमलाई फ्रि किकको मौका दिइनेछ । तर, बक्सभित्र दिइने भनिएको फ्रि किक प्रहारमा अन्य के–के सर्त रहन्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट पारिएको छैन ।
परिवर्तन भएका यी नियमहरू तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस् ।
प्रकाशित मिति १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ११:४४